Hojiin Raayyaa Ittisaa gahoomsuf eegalame cimee itti fufa-MM Dooktar Abiy Ahmad – Fana Broadcasting Corporate
Hojiin Raayyaa Ittisaa gahoomsuf eegalame cimee itti fufa-MM Dooktar Abiy Ahmad
Finfinnee, Onkololeessa 29,2011(FBC)-Muummeen ministiraa marii humnoota waraanaa sadarkaa sadarkaan jiran waliin taasifame ture irratti gunduunfaa laachuf hoggantoota waraanaa olaanoo ajajaa kutaa waraanaa ol jiran waliin mari’ataniiru.
Muummeen ministiraa Dooktar Abiy Ahmad ibsa waltajjicha irratti kennaniin,humna raayyaa gama hundaan cimsuuf hojiin eegalamee cimee itti fufa jechuun, yeroo dhiyoo asitti humnicha ammayyaa’aa, gahumsafi bu’a qabeessa taasisuuf kan hojjetamu ta’uu ibsaniiru.
Dooktar Abiy Ahmad ibsa isaanii har’aan hundaa’ol hoggantummaa Raayyaa Ittisaa irratti kan xiyyeeffatan yoo ta’u,keessattuu dandeettii gaggeessummaa,raawwii dirqamaa irratti aangoo fi humna seeran itti fayyadamuu haala danda’amu irratti mari’ataniiru.
Raayyaan Ittisaa karaa kamiinuu heera mootummaaf kan bitamuu fi heerafi biyyattii tiksuuf kan dhaabbate ta’uu kan eeran ajajaan olaanaa humna Ittisaa Dooktar Abiy Ahmad,baajatni humna kanaa qabamus kanumarraa ka’eeti jedhaniiru.
Bu’uura heera mootummaatiin ergamni itti kennamee yeroo dirqama bahamuus meeshaa of harkaa qaban humna godhachuun osoo hin taane tarkaanfin fudhatamu hundi of eeggannoo olaanaadhaan heeraa bitamuu fi ummataa quuqamuun ta’uu akka qabu eeraniiru.
Kanaafis qajeelfamoonni bobbii dirqamaa irra deebin kan sirreeffaman ta’uu Muummeen ministiraa himaniiru.
Ji’oottan 7 darbanitti raayyaan ittisaa jijjiirama olaanaa irra kan jiru ta’uu eerun,jijjiirama kanas bu’uura heeraa,gahumsaa fi hidhannoon kan ifuudha.
Gama bu’uura heeratiinis humnichi gara fuula duraatti gurmaa’insa humna galaanarraa, saayibariifi hawaa akka qabaatuf hojjetamaa jiraachuu Muummeen ministiraa kaasaniiru.
Humnichi bakka bu’oota saboota fi sablammoota hundaa akka qabaatuf kan hojjetamuu fi teeknooloojitti akka fayyadamuuf yeroo kamiiyyuu caalaa xiyyeeffannoon ni kennamas jedhaniiru.
Waraanni ammayyaa kan gaafatu humnoota lafoo,qilleensaa,galaanarraa,saayibarii fi hawaa ijaaruf hojiin eegalamuu beeksisaniiru.
Gurmaa’inssi kanaan duraa hudhaalee garaa garaa qabaachuu fi qorannoon gaggeeffamee gurmaa’insi haaraa mirkanaa’uu ibsaniiru.
Fayyadama faayinaansii fi baasii icciitii damichaa akkuma eeggametti ta’ee,qajeelfamoota ifa ta’aniin akka hogganamu hojimaanni diriifamee jira jedhaniiru.
Raayyaan ittisaa humna ammayyaan akka ijaaramuuf dandeettin ergama bahachuu akka dabaluuf hojiilen qorataman raawwatamaa jiraachuu ibsameera.
Guyyaan haqaa biyyoolessaa Qaammee 5 kabajamee oola
Guuta laga Awaashin namoota deeggaramuu qabaniif deeggarsi dhiyaachaa jira
Koreen fala barbaadduu dilbii hawaasaa hojii eegale
Yaadannoo waggaa 7ffaa obbo Mallas sababeeffachuun biqiltuun dhaabame